जोरबिजोर लागु हुदा पनि उपत्यकामा भिडभाड जस्ताको तेस्तै कोरॊना को उच्च जोखिम ! «
जोरबिजोर लागु हुदा पनि उपत्यकामा भिडभाड जस्ताको तेस्तै कोरॊना को उच्च जोखिम !
Published :9August, 2020 12:59 pm
सरकारले उपत्यकामा निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरेको भएपनि सडकमा सवारीसाधनको चाप उस्तै देखिएको छ । राजधानीका सडकमा आइतबार बिजोर नम्बर प्लेटको सवारीसाधन चल्ने भएपनि प्रहरीको आँखा छल्दै जोर नम्बरका सवारीसाधन पनि उल्लेख्य रुपमा चलेका छन् । यद्यपि चोकचोकमा प्रहरीले चेकजाँचमा कडाइ गरिरहेको छ ।
शुक्रबार उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयुक्त बैठकले आइतबारदेखि प्रशासनबाट प्रदान गरिने अत्यावश्यक सेवाबाहेक अरु सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, जिल्लाका अन्य सरकारी सेवाहरु, उद्योग कलकारखाना, सार्वजनिक यातायात लगायतले दिने सेवाहरु भने निर्वाध सञ्चालनमा रहेका छन् । भलै यातायातमा भने जोरबिजोर लागू गरिएको हो । कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै सरकारी तहबाट अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक हिँडडूल नगर्न निरन्तर आग्रह हुँदै आएपनि सडकमा भिडभाड उस्तै देखिन्छ ।